"Tshintshela" ibiyintoni iMac ngoku yi-iPhone | Ndisuka mac
«Tshintsha» ibiyintoni iMac ngoku yi-iPhone
Ingabonakala ngathi indala okanye abanye basenokungazi nokuba sithetha ngantoni, kodwa «itshintshi» ekucaca ukuba ivela kwigama elithi «Guqula» kwakusekudala abo basebenzisi basuka kwikhompyuter benenkqubo yokusebenza yeWindows besiya kwenye ene-macOS. Oku uninzi lwabantu abakhoyo abanokungayazi nokuba yinto esetyenziselwe thina-ndiyazibandakanya kuba ndize kwi-Mac kunye neeprosesa ze-Intel kwiikhompyuter- intsha ngokupheleleyo kwinkqubo yokusebenza yeMac emehlweni abo basebenzisi bokuqala Iikhompyuter ze-Apple ezazisokola kunye nezixhobo ezimbalwa kunye nezintsonkothileyo ababenazo ngaloo maxesha ngokuthelekiswa nezinye iikhompyuter.
Ngendlela efanayo ukuba inkampani yaseCupertino isebenzise igama elithi Tshintshela abo basebenzisi beze eMac kwaye abafuna uncedo oluthile ukuziqhelanisa nenkqubo yokusebenza kwabafana baseCupertino abanemikhankaso eyintsomi enje ngokuba "Fumana iMac" ifakiwe, ngoku kunjalo ukusebenzisa kubasebenzisi abavela kwi-Android ukuhlala kwi-iOS. U-Apple ubeke eli phulo kudala kudala kolunye uhlaziyo kwiwebhusayithi yenkampani kwaye ngoku iyasebenza kwakhona kwi-Android ukuya kutshintsho lwe-iOS.
Kwiwebhu sifumana eli candelo lisebenzayo ngoku Kwakhona ngesiNgesi, ewe, kodwa iba yinkumbulo kwaye yenye yeentshukumo ezibonisa utshintsho luka-Apple ngokuhamba kwexesha ukuya kwimveliso eneyona mveliso, i-iPhone. Ke sijamelene nohlobo lokudluliswa kwamagunya phakathi kweeMacs kunye nee-iPhones ezisenomdla kuwo wonke umntu kwaye ezikhokelela abanye kuthi ekuqalekeni kwale Macs kunye neApple ngokubanzi. Ngaba ubukhe watshintsha naye?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » «Tshintsha» ibiyintoni iMac ngoku yi-iPhone